Ukuvulwa kweakhawunti ye-Offshore eBahamas - iiNkampani eziNxweme zaseSwitzerland eziNxweme
Xa uthatha isigqibo sokuvula a akhawunti yebhanki kwiqonga le Bhahamas Kubalulekile ukwazi ubungakanani bemali eza kuqokelelwa kwiakhawunti njengoko ibhanki nganye inemigaqo-nkqubo eyahlukeneyo kunye neendlela zokuvula ezahlukeneyo kunye nobuncinci bezemali ekufuneka zigcinwe engqondweni.
ahamas Ilizwe elizimeleyo elikwiLwandlekazi lweAtlantiki, emantla eCuba, emantla ntshona eTurks naseCaicos, nakwimpuma yePeninsula yaseFlorida. Sisiphithiphithi seziqithi ezingamashumi amabini anesine esihlala abantu kunye namatye angaphezulu kwama-2000, iingxondorha kunye neziqithi ezingenamntu. Ngengxowankulu uNassau, iBahamas inoqoqosho olusekwe kukhenketho kwaye Ukusebenza ngokungaphaya kwebhanki. Kolu lawulo lwerhafu, abantu abangabemi banokonwaba kwiinkonzo ezahlukeneyo zebhanki engaphesheya nge-Intanethi, kwaye benze iinkampani ezingaselwandle.
Iiakhawunti zabarhwebi baseBahamas
Phakathi kweenkonzo zebhanki esetyenziswayo kwii-Bahamas siyifumana iiakhawunti zabarhwebi for Utyalomali kwimarike yemasheya. Kukho izibonelelo zerhafu ngokubhekiselele kokungabikho kweerhafu kwinzuzo nakwinzuzo enkulu. Abrhwebi abaninzi basebenza kwiBahamas nge izabelo, ukhetho, ikamva okanye iibhondi kwiimarike eziphambili zesitokhwe. Ungavula iakhawunti urhwebo lokuthengisa kude nonxweme kwiibhanki ezahlukeneyo zeBahamas; Ezi akhawunti zikhuselwe yimfihlo yebhanki ukongeza uzinzo kwezopolitiko kwelizwe.
Kusemthethweni na ukuvula iakhawunti yebhanki engaphesheya e-Bahamas?
Kufuneka sigxininise ukuba kusemthethweni ukuvula a Bahamas iakhawunti yebhanki engaselunxwemeni, okanye nakweyiphi na Ulawulo lwaphesheya okanye irhafu ephantsi. Izenzo ezingekho mthethweni ziyavela xa umxhamli esitsho iiakhawunti zaselwandle
Kuya kufuneka sikhumbule ukuba enye yeempawu eziphambili ezinolawulo lwaselunxwemeni kukubhengezwa kunye nokubhengezwa kolwazi lwerhafu lwabathengi babo.
Izizathu eziphambili zokuba uneakhawunti yebhanki engaphesheya kolwandle eBahamas
A Ngamanye amaxesha, kungcono ukuba sityale imali kunye nenkampani yethu evela phesheya kuba, ukuba siyayenza ngokwenkampani yethu kwilizwe lethu lokuhlala, siya kuhlawula irhafu ephezulu.
EAmathuba apho ubomi bunokudlala ngobuqhophololo: uqhawulo-mtshato, amatyala, uxanduva loluntu, isoyikiso sokuvalelwa ejele ... kufuneka sibe nayo yonke into ecwangcisiweyo nangasisiseko, iinkampani neeakhawunti zebhanki elunxwemeni singazinciphisa ezi ngxaki zemihla ngemihla.
Izibonelelo zokuvula iakhawunti yebhanki engaphesheya e-Bahamas
as iibhanki ze-bahamian Banokukunika, phakathi kwabanye, ezi zinto zilandelayo zilandelayo:
Irhafu ephantsi okanye zero kwizindlu zabahlali nakwabo bangengobemi.
Iimfihlo zebhanki kunye nezorhwebo olusekwe ngumthetho (ukophula imfihlakalo yasebhanki ukohlwaywa ngokuvalelwa kunye nezohlwayo eziphezulu).
Umthetho wezemali kunye nokuthengisa ngokungaxhamli kangako njengoko kufuneka iimfuno ezimbalwa zokuvula ii-akhawunti zebhanki.
Akukho utshintshe ulawulo kwaye kukho inkululeko enkulu kwintshukumo yenkulu
Umgaqo omncinci wokubhankisha.
Uzinzo olukhulu kwezopolitiko nakuqoqosho kuba ukuba bekukho uhlobo oluthile lwengxaki elizweni, bekuya kubakho inqwelo moya enkulu kwaye oku akunomdla nakwezinye iindawo zolawulo lwangaphandle.
Kula magunya akukho Ulwazi malunga nezivumelwano zorhwebo ngerhafu namazwe erhafu ephezulu.
Las Bhahamas Inonxibelelwano olufanelekileyo kwaye ngakumbi unxibelelwano.
Abasebenzi Ukubhankisha kwi-Intanethi Kukho iilwimi ezininzi: isiNgesi, isiFrentshi, isiJamani, iSpanish, isiRashiya kunye nesiTshayina ngenkonzo yeeyure ezingama-24, iintsuku ezingama-365 ngonyaka.
Inkqubo yemithetho eguqukayo
Iibhanki ezinkulu ezingaselunxwemeni zisebenza e-Bahamas
Sitsalele iimfuno zakho. Singavula eyakho Iakhawunti yebhanki yaseBahamas ngaphandle kokufuna naluphi na uhlobo lokufuduswa okanye ukuphazamiseka kwicala lakho.
Ulwazi lwethu kwiibhanki zamazwe ngamazwe isenza sikwazi ukubonelela ngezi nkonzo kumazwekazi awahlukeneyo kwaye zihlala zisebhankini ngaphakathi Phezulu ngama-25 kwihlabathi liphelaAsisebenzi neebhanki zenqanaba elingaphantsi kune-EU. i-USA imigaqo Uhlobo lwe-FINMA, Basel. Sinikezela ngeeakhawunti zebhanki zamacandelo e-e-commerce ne-Forex, sisombulula ukuvulwa kweeakhawunti ezikhethekileyo eAsia, eMelika naseYurophu.